भाईरल ‘सुरज घिमिरे’को सबैलाई रुवाउने कथा : आमा बुवासँग छुट्टिएर बस्दा रोए !
सुदिप भण्डारी : टिकटकमा निकै नै राम्रो अभिनय कला प्रस्तुत गरेर सबै माँझ लोकप्रिय बनेका फोटोग्राफ र सुरज अर्थात सुरज घिमिरेलाई शिशिर भण्डारीले मिडियामा ल्याएका छन् ।
गाउँले परिवेशमा सन्देश मुलक र समसामयिक टिकटक भिडियोहरु बनाएर आफ्नो अभिनय कला र पविधिक पाटोलाई उजागर गर्दै यसै क्षेत्रमा सपना बुन्दै अगाडि बढिरहेका सुरजको अभिनयलाई धेरैले नेपालमा चल्तीमा रहेका कलाकार अर्थात भनौं राम्रो अभिनय गर्ने कलाकारलाई पनि टक्कर दिने अभिनयको रुपमा कमेन्ट गर्दछन् ।
अर्घाखाँचीका सुरज यतिबेला बुटवल साथीकोमा बसेर सँघर्ष गरिरहेका छन् । सुरजको एउटा सिरियल पनि उनको आफ्नै युटुब च्यानलबाट खदर्शक माँझ आउँदछ । साने नामक सिरियलमा उनले सामाजिक कथावस्तु प्रस्तुत गर्दछन् । लामो कपालमा गाउँले अभिनय गरेर उनी सबै माँझ रुचाईए । शिशिर भण्डारीसँगको कुराकानीमा सुरजले आफु गाउँ छोडेर यो ठाउँमा सँघर्ष गर्दा घर परिवारको निकै याद आउने बताए ।
काठमाडौंबाट थुप्रै सिरियलबाट उनलाई अफर आईरहेको छ । उनी पनि रम्रो मौका छोप्ने पषमा छन् । वरीपरीका सबै र भेट्ने जति सबैले सुरजलाई चिन्दछन् । यो मायाका लागि उनले सबैलाई धन्यवाद दिए । घर छोडेर सुरज किन टाढा बसे ? भिडियो हेर्नुस